China I Iphone7 Esikhundleni Sokubheja China Manufacturers & Suppliers & Factory
I Iphone7 Esikhundleni Sokubheja - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-I Iphone7 Esikhundleni Sokubheja)
I-iPhone 7 I-LCD Ibonisa i-3D Touch Touch Digitizer esikhundleni
Ukufakwa Kwesikrini kwe-iPhone 7 Omnyama 4.7 "Ukubukwa kwe-LCD kwe-3D Touch Digitizer Frame Frame Kit Yokulungisa Okugcwele Iyahambisana ne-iphone 7 4.7 intshi kuphela, ayihambisani neminye imodeli, hhayi nge-6S 4.7
Umjikelezo omusha we- iPhone7 I-Replacement Li-ion Ibhethri ene-Original Te transg Instruments (TI) IC I-iPhone7 1960mAh 4.3V 7.45whr Lena yinto yokuqala okudingeka ukwazi ngayo nge-iPhone isikhathi sokuphila kwebhethri ngamakhilomitha angu-500 ngokujwayelekile. Umjikelezo wokukhokha ukuthi ibhethri yakho ithatha...
Umjikelezo omusha we- iPhone7 Plus esikhundleni se-Battery nge-Original Texax Instruments (TI) IC I-iPhone7 Plus 2900mAh 4.3V 11.1whr Lena yinto yokuqala okudingeka ukwazi ngayo nge-iPhone isikhathi sokuphila kwebhethri ngamakhilomitha angu-500 ngokujwayelekile. Umjikelezo wokukhokha ukuthi ibhethri yakho ithatha...
I-Brandnew iPhone 6 Ibhethri Yokufaka esikhundleni se-Original Texas Instruments IC I-iPhone 6G 1810mAh 4.3V 6.91whr Lokhu kuyinto yokuqala okudingeka ukwazi ngayo nge-iPhone6 ​​Battery Replacement life: ama-iPhones awanakulinganisani ukuphila kwabo kwebhethri eminyakeni kodwa emjikelezweni. Umjikelezo wokukhokha...
I-iPhone 6Plus Faka esikhundleni iBhetri nge-Advanced TI IC
I-AAAA Ibanga le-iPhone 6Plus ibhethri esikhundleni se-Original Texas Instruments IC I-iPhone 6Plus 2915mAh 4.3V 11.1whr I-Apple iyakuthanda imodeli yase-Older ye-iPhone ingase ihlehliswe ngenxa yebhethri eliguga. Uma udinga indawo entsha ye-iPhone 6Plus yebhethri ye- iPhone yakho yokuguga, izinto kungenzeka ukuthi...
I-iPhone 6 Plus Ukubheja kwebhethri nge-Original Texas Instruments IC I-iPhone 6 Plus 2915mAh 4.3V 11.1whr Le Battery ye-iPhone 6Plus ene-TI IC Iyahambisana ne-iPhone 6 Plus, i-Model A1522, A1524 ne-A1593. Akuyona i-6S Plus noma enye imodeli ye-iPhone. Njengoba i-iOS 11.3 ibuyekeziwe, i-TI yokuvikela yangempela...
I-Brandnew ye-iPhone 7 Plus Indawo ye-Lithium-ion esikhundleni sebhethri nge-Factory Price I-iPhone 7 Plus 2900mAh 4.3V 11.1whr Ingabe i-iPhone 7 Plus i-Lithium-ion ibhethri idlidliza ngokushesha? Amabhethri ayibuchwepheshe obuyinkimbinkimbi, futhi izinombolo ezihlukahlukene zifaka ekusebenzeni kwebhethri nokusebenza...
I-Brandnew i-iPhone 6S Plus esikhundleni se-Battery Ukukhulisa Ukuphila Kwebhethri 1.5 Iminyaka I-iPhone 6S Plus 2750mAh 4.3V 10.45whr Ingabe i-iPhone yakho 6S Plus ibhethri idla ngokushesha kakhulu? Amabhethri ayibuchwepheshe obuyinkimbinkimbi, futhi izinombolo ezihlukahlukene zifaka ekusebenzeni kwebhethri...
I-Brandnew i-iPhone 6S Ukufaka esikhundleni se-Battery Ukudlulisa iminyaka engu-1.5 ye-Battery Life I-iPhone 6S 1715mAh 4.3V 6.55whr Ingabe i-iPhone yakho 6S Li-ion ibhethri idla ngokushesha kakhulu? Uma udinga i-Brandnew IPhone 6S esikhundleni sebhethri ye- iPhone yakho yokuguga, izinto kungenzeka zithole lula...
I-Brandnew i-iPhone 6 Plus esikhundleni se-Lithium-ion Ibhetri ene-Factory Price I-iPhone 6 Plus 2915mAh 4.3V 11.1whr Ingabe ibhethri yakho ye-iPhone 6 Plus idonsela ngokushesha? Amabhethri ayibuchwepheshe obuyinkimbinkimbi, futhi izinombolo ezihlukahlukene zifaka ekusebenzeni kwebhethri nokusebenza kwe-iPhone...
I-Brandnew ye-iPhone 5C esikhundleni se-lithium ion Battery
I-Brandnew ye-iPhone 5C esikhundleni se-Lithium ion Ibhetri ene-Factory Price I-iPhone 5C 1510mAh 4.3V 5.7whr Nweba impilo yakho yebhethri ye-iPhone 5C ngenkathi ushintsha nge-iPhone 5C Lithium-ion Ibhetri. Yenziwe kusuka ku-brandnew cell ehlanzekile cobalt ngomjikelezo we-0, ibhodi lokuvikela kanye nesifunda...
Umjikelezo we-Brandnew 0 we-iPhone 5S esikhundleni se-Battery
I-Brandnew ye-iPhone 5S esikhundleni se-Lithium ion Ibhetri ene-Factory Price I-iPhone 5S 1560mAh 4.3V 5.9whr Sinikeza ngomjikelezo we-iPhone we-iPhone 5S Ibhethri eyenziwe ngezinto ezisetshenziswayo ezintsha ezibandakanya i-100% ehlanzekile cobalt cell nomjikelezo we-0, ibhodi lokuvikela ne-FPC. Akugcini nje kuphela...
I-Brandnew ye-iPhone 5 esikhundleni sebhethri ye-lithium ion
I-Brandnew ye-iPhone 5 esikhundleni se-Lithium-ion Ibhetri ene-Factory Price I-iPhone 5 1440mAh 4.3V 5.4whr Ingabe i-iPhone 5 Lithium-ion yakho ibhethri idle ngokushesha? I-iPhone ekhishwayo I-lithium-ion Ibhetri yikhokhnoloji eyinkimbinkimbi, futhi izinombolo eziningana zifaka ekusebenzeni kwebhethri nokusebenza...
I-iPhone 4S Ibhethri esikhundleni se-lithium-ion Ibhetri
Ukupakisha: Ukuphepha kwe-iPhone 4S I-lithium ion Battery Packing
I-Brandnew ye-iPhone 4S Ibhethri esikhundleni se-lithium-ion Ibhetri ekuphumeni kweBettery Life 1.5 Iminyaka I-iPhone 4S 1430mAh 4.2V 5.2whr Lona i-iPhone 4S Lithium-ion Ukushintshwa kwebhethri okungashintsha kalula ibhethri efonini yakho. Unayo i-iPhone 4S engeke ibeke icala? Kungakhathaliseki ukuthi ibhethri ihlehla...
Ibhethri yokufaka esikhundleni ye-iPhone 5S ihambisana ne-16GB / 64GB
Umjikelezo omusha we-iPhone 5S 1560mAh esikhundleni sebhethri Pack I-iPhone 5S 1560mAh 4.3V 5.45whr Sisebenza umkhiqizo we-iPhone 5S ithrekhi yebhethri eyathatha indawo eyenziwa ngamaseli omjikelezo we-Brandnew zero kanye nebhodi lokuvikela, i-FPC (Flexible Printed Circuit). Ukuphila kwebhethri ngezikhathi...
I Iphone7 Esikhundleni Sokubheja I-iPhone7 esikhundleni sokubheja I-iPhone 5C esikhundleni sokunikezela IPhone SE Faka esikhundleni iBhetri I-iPhone 6 Plus esikhundleni sebhethri Ipakethe ye-IP esikhundleni sebhethri I-iPhone 6 I-LCD esikhundleni Ibhethri ye-iPhone 7 Plus esikhundleni